Ahoana ny fomba hamehezana ny dian'ny mpanjifanao | Martech Zone
Talata, Janoary 24, 2017 Asabotsy 13 Febroary 2021 Douglas Karr
Fandrosoana lehibe eo amin'ny famakafakana marketing sy antontan-taratasy ny fisehoan'ny sari-tanin'ny mpanjifa mba hanampiana hanoratra, handrefesana ary hanatsarana ny fahombiazan'ny varotra - indrindra amin'ny Internet.
Inona ny sarintany fitsangatsanganana ho an'ny mpanjifa?
Ny sarintanin'ny dia nataon'ny mpanjifa dia ny fomba anehoanao an-tsaina ny traikefan'ny mpanjifanao amin'ny marikao. Sari-tany fitsangatsanganana ho an'ny mpanjifa no manadihady ireo teboka mikasika ny mpanjifa an-tserasera sy ivelan'ny Internet ary manoratra ny fomba handrefesanao ny fahombiazan'ny touchpoint tsirairay. Izany dia ahafahan'ny mpivarotra mahatakatra tsara kokoa ny fifandraisan'ny mpanjifa aminao hahafahanao manatsara ny dian'ny mpanjifa, manala ny banga sy ny sakana amin'ny lalana mba hampitomboana ny fahafaham-pon'ny mpanjifa, ny firotsahana, ny fiovam-po ary ny fotoana avo lenta.
Tsy toy ny fantsom-pandrenesan'ny mpanjifa izay mandeha làlana, ny dian'ny mpanjifa dia afaka mampiseho làlana marobe amin'ny toerana andraisan'ny mpanjifa fanapahan-kevitra sy ny fihetsiny amin'ny fifandraisan'ny marika. Ny sarintany fitsangatsanganana ho an'ny mpanjifa dia afaka manampy ny ekipan'ny marketing anao koa hampifantoka ny doka sy ny fampivoarana atiny ho an'ny olona mpanjifa manokana. Na dia mety manana fihodinam-bola tsy voafetra aza ny mpanjifanao dia misy lalana mitovy amin'izany amin'ny ankapobeny no ahitanao fa mivezivezy ny mpanjifa (na manantena ianao fa handeha hidina izy ireo).
85% amin'ireo mpivarotra ambaratonga ambony no mino fa tena zava-dehibe ny famoronana fitsangatsanganana ho an'ny mpanjifa, fa ny 40% ihany no mampiasa ny teny hoe fitsangatsanganana ho an'ny mpanjifa. 29% amin'ireo orinasam-pandraharahana ihany no manome isa ny tenany mahomby amin'ny famoronana fitsangatsanganana ho an'ny mpanjifa.
Angony ny angona fanadihadiana efa misy avy amin'ny tranokalanao Analytics, sehatra marketing, CRM, angona varotra ary loharano hafa.
Angony angona anecdotal miainga amin'ny fanaraha-maso ny media sosialy sy ny valin'ny hevitry ny mpanjifa ka hatrany amin'ny fahatsapana bebe kokoa sy ny lanjan'ireo tahirin-kevitra momba ny famakafakana.
Atambaro ireo teboka angona amina dingana ao anatin'ny fizotran'ny vanim-potoana (hazondamosina) izay mampifandray ireo fifandraisana toy ny fangatahana, fampitahana ary fanapahan-kevitra. Ampidiro ny ezaka marketing anao isaky ny teboka.
Adikao ny angona ary diniho ny dingana tsirairay na ny lafiny fitadiavana mba hanamorana ny dia, haingana, na mahafinaritra kokoa.
Salesforce dia namokatra an'ity sary mahafinaritra ity, Sarintany fitsangatsanganana ho an'ny mpanjifa: Ahoana ny fomba hitarihana ny mpitarika anao, mba hanehoana ny fizotran'ny fandraketana ny dian'ny mpanjifanao, ny famaritana ny dingana tsirairay, ary ny fampiharana ireo refy mifanaraka amin'izany amin'ny dingana tsirairay.
Hiaina fitsangatsanganana ho an'ny mpanjifa amin'ny Salesforce
Tags: manadihady ny angon-drakitra ho an'ny mpanjifateboka momba ny mpanjifaMpanjanantanysari-tanin'ny mpanjifasarintanin'ny mpanjifatouchpoint an'ny mpanjifahitarikampitarikaahoana nomaneho ny angon-drakitra ho an'ny mpanjifasalesforceinona ny
Mpanoratra maherin'ny 100 no mizara ny fahalalany amin'ny boky Bizina tsara kokoa